Anaghị m eme ọtụtụ amụma mgbe ọ bịara n'ọdịnihu nke teknụzụ, mana mgbe m hụrụ ọhụụ teknụzụ, a na m ahụkarị ikike dị egwu maka ndị ahịa. Mgbanwe nke ọgụgụ isi nke jikọtara ya na akụ na-enweghị njedebe nke bandwidth, ike nhazi, ebe nchekwa na oghere ga-etinye nkata ihu n'ihu n'etiti ndị ahịa.
Kedu ihe bụ Chatbot?
Mkparịta ụka nkata bụ mmemme kọmputa na-e mimomi mkparịta ụka na ndị mmadụ na-eji ọgụgụ isi. Ha nwere ike igbanwe uzo i si eso intaneti eme ihe site na oru ndi mmadu malitere iji aka gi kwurita okwu. Julia Carrie Wong, Onye nche
Chatbots abụghị ihe ọhụrụ, ha anọgodi ogologo oge nkata dị. Ihe gbanwere bụ ikike ha na mmadụ nwere ịkparịta ụka. N'ezie, teknụzụ dị elu nke ukwuu na enwere ohere ị nwereworị iso mkparịta ụka na mkparịta ụka na -adịghị achọpụta.
Ihe Mere Ndị Ahịa Ga-eji Jiri Nkata
Enwere ụzọ abụọ iji emekọrịta site na weebụ. Mkparịta ụka na-agafe agafe na-ahapụ onye ọbịa ahụ ka ọ malite ịkpọtụrụ akara gị. Mkparịta ụka na-agba ọsọ na-ebute kọntaktị ahụ na onye ọbịa. Mgbe akara malitere ịkpọtụrụ onye ọbịa; iji maa atụ, jụọ onye ọbịa ma ha chọọ enyemaka, imirikiti ndị ọbịa ga-aza. Ọ bụrụ n’inwere ike itinye aka ma nyere onye ọbịa ahụ aka, ị nwere ike mezuo ọtụtụ ebumnuche:
Njikọ ndị ọbịa - Ndi ụlọ ọrụ gị nwere akụrụngwa ịjụ ndị ọbịa ọ bụla otu ị ga-esi nyere ha aka? Amaghị m ụlọ ọrụ na-eme… mana chatbot nwere ike ịba ụba ma zaghachi ọtụtụ ndị ọbịa dịka ọ dị mkpa, mgbe ọ dị mkpa.
Nzaghachi saịtị - Colnakọta data dị oke mkpa banyere ibe gị site na onye ọbịa gị nwere ike inyere gị aka melite saịtị gị. Ọ bụrụ na onye ọ bụla na-abanye na ibe ngwaahịa mana ọ gbagwojuru anya maka ọnụego, ndị ahịa gị nwere ike ịkwalite ibe ahụ na ozi ọnụahịa iji melite mgbanwe.
Nduzi Nduku - Ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke ndị ọbịa agaghị enwe ike iso gị rụọ ọrụ. Ha nwere ike ghara inwe mmefu ego. Ha nwere ike ha enweghị usoro iheomume. Ha nwere ike ha enweghị ego ndị ọzọ dị mkpa. A chatbot nwere ike inyere aka chọpụta nke ndị na-eduga ruru eru ma chụga ha na ndị ahịa gị ma ọ bụ na ntughari.
Idu Nurturing - Colnakọta ozi gbasara atụmanya gị nwere ike inyere gị aka ịhazi ma soro ha na njem njem ndị ahịa ma ọ bụ mgbe ha laghachiri na saịtị ahụ.
Nduzi - Ọbịa bịara n’otu peeji mana enweghị ike ịchọta akụ ha na-achọ. Mkparịta ụka gị na-ajụ ha, atụmanya ahụ zara, nkata ahụ na-ewetara ha peeji nke ngwaahịa, akwụkwọ akụkọ ọcha, post blọgụ, foto ma ọ bụ ọbụlagodi vidiyo nke nwere ike inye aka ịkwanye ha njem ha.
mkpakorita - Ndị na-ere ahịa amaraworị otu esi arụ ọrụ na nwughachi nke ọma ozugbo onye ọbịa bịara na saịtị gị. Ọ́ bụrụkwanụ na unu nwere ike ikwurịta tupu ha apụwa? Ikekwe ọnụahịa ahụ dị ntakịrị nke mere na ị nwere ike ịnye atụmatụ ịkwụ ụgwọ.
Cheedị echiche ịnwe ndị otu ekele na - akparaghị ókè itinye aka na ndị ọbịa gị ma nyere gị aka duzie ha gaa nzụta… nke ahụ agaghị abụ nrọ nrọ? Ọfọn, nke ahụ bụ ihe ọgụgụ isi na nkata ga-abụ maka ndị ahịa gị.
Akụkọ banyere Chatbots
Infographic site na Futurism.
Tags: aiAmamịghe echichebotbotsnkata botnkatachatbot akụkọ ihe mere emenjem ndị ahịanduziakụkọ banyere chatbotsndu nurturingedu ndúnzaghachi saịtịaka ndị ọbịaihegịnị bụ chatbot
Aug 23, 2016 na 2:51 PM
N'ezie n'ime isiokwu a na infographic ahụ, mana enwere m olile anya na anyị agaghị eche banyere nkata nkata dị ka usoro mmalite evolushọn maka bọọlụ niile!
Anyị na-eche banyere bots na otu ha kwesịrị isi nye aka maka afọ 6 +. Gịnị bụ echiche anyị? N'ezie bots ndị na-agbanwe agbanwe ga-adị nnọọ mma karịa bots ndị a na - akparịta ụka - ọ ga - abụrịrị na anyị ga - akwụsị ịkọwa ụdị bots nkata a dịka bọọlụ niile.
Ihe atụ - bọọlụ ndị a dị ka Web 1.0. Ha na-arụ ọrụ, mana ọ naghị enwe mmekọrịta mmadụ na ibe ya - ọ dị ka mgbe sistemụ arụmọrụ akpaghị aka dochie ezigbo nkwado ndị ahịa.
Tinyere ndị ọrụ nke ngwanrọ anyị, UBot Studio, nke na-eme ka onye ọ bụla wulite bots, anyị na-eche kedu ihe bots bara uru n'ezie maka, ogologo oge.
Anyị na-ewekọta saịtị ntanetị nke nwere ọtụtụ ozi ụlọ bot, gụnyere ụfọdụ amụma dị ntakịrị-mgbidi. Lelee ya na http://www.botsoftware.org. Ọ bụ maka bots n’ozuzu, ọ bụghị naanị nkata bots, mana ọ kwesịrị ịba uru maka onye ọ bụla chọrọ ịmụtakwu ihe!
Daalụ maka edemede gị!